Kuzobongwa nezinyanya ngempumelelo yoKhozi FM - Ilanga News
Home Izindaba Kuzobongwa nezinyanya ngempumelelo yoKhozi FM
U-VVO uzogingqela abaphathi balo msakazo inkomo esigodlweni sakhe
UDKT Bhedlindaba “VVO” Mkhize uzogingqa inkomo ebungaza nomsakazo uKhozi FM ukufinyelela ezigidini eziwu-8 zabalaleli balo msakazo.
UZOBUNGAZA noKhozi FM ngokugingqa inkomo esigodlweni sakhe, bebonga ukwenyukela ku-8 million kwesibalo sabalaleli balesi sikhondla-khondla somsakazo umelaphi wendabuko futhi ongumsunguli woMsamo Institute, uDkt Bhedlindaba “VVO” Mkhize.
Kuzoqopheka umlando esigodlweni saseMlambomunye ngaphandle kancane kwaseMgungundlovu, esigodlweni sikaDkt Mkhize ngeSonto emini njengoba kulindeleke ukuba ezinye zezinhlelo zalo msakazo zisakazwe khona bukhoma ngeSonto emini.
UDkt Mkhize owaziwa kakhulu ngokuba ngumbhali wezincwadi aphinde abe ngumelaphi wendabuko nesazi samasiko, uphinde abe nesigatshana kuwo lo msakazo lapho esuke ekhuluma ngezinto ezikhuluma ngesintu ohlelweni lukaDudu “Lady D” Khoza njalo ngoLwesithathu emini, olubizwa ngokuthi Ingono yoMsamo.
Ngemuva kokuthola isimemo ngalo mcimbi, ILANGA lishayele uDkt Mkhize othe: “Ngemuva kokuthola ukuthi umsakazo wethu usufinyelele kulesi sibalo okuyinto enkulu, ngibe sengifikelwa yi-nto eyodwa ukuthi kubalulekile ukuba sibungaze ngendlela ehloniphekile lokhu okwenzekayo.
“Ngibe sengikhuluma nabaphathi besiteshi, ngabacela ukuba ngibahlabele inkomo ngibabongise ngomsebenzi omuhle kangaka asebewenzile. Njengomelaphi wendabuko nomuntu okholelwayo ezintweni zesintu, ngibone kubalulekile ukuba ngibahlabele isi-lwane, ngibonge kanye nabo kwabaphansi ngento abayenzele umsakazo wethu omkhulu kangaka,” kusho uDkt Mkhize.
Kuzokhumbuleka ukuthi naye uDkt Mkhize uke waba ngumsakazi kulesi siteshi eminyakeni eminingi edlule, ngesikhathi sisabizwa ngeRadio Zulu. Ubalwa nezi-ngwazi zabasakazi ezaba ngumhlahlandlela kulesi siteshi.
Imizamo yaleli phephandaba yokuthola abaphathi balo msakazo kayiphumelela-nga kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.
Phakathi kwabasakazi okulindeleke ukuba babe yingxenye yalolu suku, yilabo abasakaza izinhlelo zangeSonto kubalwa uNko-sinathi Mshengu wohlelo i-Love Zone olungena ngo-12h00 kuya ku-15h00.
Previous articleImibuzo kunyamalala owathola umsebenzi “wagula ngengqondo”
Next articleUsabhacile undlunkulu kaJG Shembe